Iibso 48V350W baaskiil buur koronto | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto baaskiilka buurta 48V 500W baaskiil buur koronto A6AT26
Xawaaraha ugu sarreeya: 30-35km / saacaddii
Awoodda Awoodda: 48V 500W / 750W burush la'aan
PAS: shan xawaare la hagaajin karo, 1: 1 caawiyaha baydalka
Heerka ugu badan: 60-100km halkii lacag
Waqtiga lacag-bixinta: 4-6 saacadood oo keliya
Gear: 7/9/21/27 gears oo leh derailleur
Muuqaal: Bandhig LCD3
Biriigu: 160 jejebiyey farsamo disc
48V 500W baaskiil buur koronto
Baaskiilada korantada ee korantada leh batari lithium, sanduuqa saddexagalka naqshadeynta cusub, wuxuu ku siin karaa 48V 20AH, oo ah inta ujrada ah 40-60KM
Dhamaan nashqadahaan waxay la kulmi karaan kuwa jecel fuulida xawaaraha sare ama dadka masaafada dheer. 500W / 750W matoor bilaa burush ah ayaa u keeni kara adeegsade kasta inuu ku raaxeysto xawaare sare oo leh 30-35 km / saacaddii. Iyo baaskiilkan korontada ku shaqeeya waxaa loo isticmaali karaa socdaalka, kaxeynta wadada, iyo safarka maalinlaha ah.
Muuqaal sawir leh oo badan oo LCD ah
Naqshadeeyay oo ay soo saartay warshaddeena, sidaa darteed way fududaan kartaa in la xakameeyo tayada. Shaashadda dhijitaalka ah ayaa tusi karta Fogaanta, Masaafada, Heerkulka, Danab, Koodh khalad iyo xog dheeri ah oo ku taal. Marka isticmaaluhu wuu ogaan karaa fudeydka mootada buurta korantada si sahlan.
48V 500W Jilib aan cillad lahayn
48V 500W matoor bilaa burush ah ayaa fududaan kara in baaskiilku gaaro xawaaraha ugu badan 25-30KM / H. Sawaxanka sareeyo ee hooseeya ayaa la kulmi kara kuwa doonaya baahi raaxo leh oo deggan. Si fudud ula qabsiga dhulka kala duwan, waxay siisaa awood ku filan waxay kuxirantahay heerka caawinta baalasha kaladuwan, waxayna kuu kaxaynaysaa inaad ku raaxaysatid baashaalka banaanka.
48V 20AH batari lithium laga saari karo
Batariga 48V 20Ah waa mid la saari karo oo dib looga buuxin karo guriga ama xafiiska. Ku qalabaysan xeedho batari 56.4V 2A smart lithium ah, iyo ilaa 5-6 saacadood oo lacag bixin ah (dami korontada isla marka aad si buuxda u buuxiso si aad u ilaaliso batteriga). Waxay bixisaa caawimaad safar ilaa 60 km halkii lacag ah, 40 km halkii koronto iyadoo loo marayo habka E-bike.
Laydhka hore ee 3W
Iftiinka hore ee cusbooneysiinta cusub, laga bilaabo 1W LED light ilaa 3W LED light. Aad u dhalaalaya oo badbaado leh marka adeegsadaha habeenkii uu wadada ku socdo. Oo la jaan qaada nalka dambe ee LED-ka, wuu burburayaa marka la is adkeeyo. Waa naqshad weyn in la xusuusiyo dadka kaa dambeeya.
Gadaal iyo gadaal gadaal waxay labaduba isticmaalaan nidaamka bareega diskiga farsamada 160. Hubso inaad hubiso badbaadadaada fuushan oo ay ku siiso xoog bir-qabad xoog leh, ha ka taxaddarin dhulalka dhooqo leh, cimilada roobka, buuraha hoostiisa iyo xaaladaha degdegga ah.
Baaskiil koronto oo badan: 26 inch iib kulul mountian mooto koronto, 48v awood sare oo buur ebike ah, ganaax buuxa e mtb, buur baaskiil koronto caadi ah, 26 gawaarida baaskiilada magaalada
Tags:baaskiil koronto baaskiilka buurta Baaskiilada buuraha ee 48V350W
Ka hor: 48V 500W baaskiilada korantada ee korantada ee G4
Next: Magnesium alwaax cirifka baaskiilada korontada ee iibinta A6AB26M